cusbooneysii-barowsarka | UnitedHealthcare Community Plan: Medicare & Medicaid Health Plans
Waxaa la joogaa waqtigii aad cusbooneysiin lahayn barowsarkaaga.
Waxay u egtahay barowsarka internet-ka aad isticmaalayso inaan la cusboonaysiin in muddo ah. Aynu ku qaadano hal daqiiqo si aad u casriyeyso barowsarkaaga hadda. Fadlan ogow inay qaadan karto dhowr daqiiqo in la cusbooneysiiyo barowsarkaaga.
Waxaan si toos ah u ogaanay barowsarkaan inuu u baahan yahay cusbooneysiin.
Cusbooneysii Chrome Hadda (Wuxuu ku furmaa Qayb Cusub)
Marka cusbooneysiintu dhammaato, barowsarka ayaa si toos ah dib u cusbooneysiin kara bogga. Haddii shubaakada barowsarkaagu ay xirmato cusbooneysiinta kadib, ha welwelin. Kaliya fur shubaako cusub. Kadib ku soo noqo mareegtayada. Waxaad ku raaxaysan doontaa daallacasho fudud, degdegsiimo leh oo aan kala joogsi lahayn.
Cusbooneysintii Ugu Dambeysay: 01.24.2022 waqtiga 11:39 SUBAXNIMO CST